Akụkọ - Gịnị bụ agba 1k na gịnị bụ agba 2K ọzọ?
Agba 1k bụ agba nwere otu akụkụ, agba 2K bụ agba nwere akụkụ abụọ.Enwere ike ịse agba nke otu akụkụ site na dilution n'otu akụkụ, na agba abụọ dị mkpa ka a ga-agbakwunye ya na ihe na-agwọ ọrịa wee tinye ya site na nsị na nha.
A na-efesa agba 1K ozugbo ka a gbasịrị ya, nke bụ ụzọ ngafe abụọ.Ngwakọta ngwakọta na dilution bụ 1: 1, ọ dịghịkwa onye na-agwọ ọrịa chọrọ.N'ihi na agba 1K nọ na steeti matte mgbe a fesasịrị ya ma gwọọ ya, a ga-efesa ya ozugbo n'elu agba nke isi mgbe ejiri varnish, onye na-agwọ ọrịa na nke dị gịrịgịrị.
Enwere ụkpụrụ ihicha abụọ maka eserese otu akụkụ.
1. Paints nwere mmanụ (mmanụ akwụkwọ nri), gụnyere: agba resin nke mmanụ, alkyd paint, wdg. Oxidative ihicha na ikuku n'ihi unsaturated abụọ agbụ.Ụkpụrụ nke ihicha bụ na agbụ abụọ na-adịghị edozi na mmanụ na-agbaji site na ntinye oxygen iji mepụta free radicals, nke a na-ejikọta ya ma gwọọ ya iji mepụta ihe nkiri.Agba a nwere drier, nke jupụtara na nitrogen n'oge nkwakọ ngwaahịa iji gbochie elu nke agba ahụ site na nsị.
2. Agba ihicha na-agbanwe agbanwe.Ụkpụrụ ihicha bụ ịdabere na volatility nke ihe mgbaze iji gwọọ iji mepụta ihe nkiri.Ọnụ ọgụgụ molekụla nke resin na agba a na-abụkarị nnukwu, nkwụsị ihe mgbaze nke ihe nkiri agba adịghị mma, na mgbanwe dị mma.
Agba 1K bụ agba nwere otu akụkụ, na agba 2K bụ agba nwere akụkụ abụọ.
1. Agba nke otu akụkụ, isi agba gbakwunyere thinner, ihe nkiri na-ehichapụ onwe ya, ọ dịghị mmeghachi omume kemịkal na-eme.Uru: ihicha ngwa ngwa, ezigbo recoatability, ezigbo brushing arụmọrụ.Ihe ọghọm: Nzuzu na-abịa nwayọọ nwayọọ, ike siri ike bụ nkezi, ọ naghị eguzogide ihe mgbaze, ọ dịghịkwa eguzogide okpomọkụ dị elu.
2. Agba nke akụkụ abụọ, isi agba gbakwunyere onye na-agwọ ọrịa gbakwunyere thinner, isi agba na onye na-agwọ ọrịa na-emeghachi omume na-emepụta ihe nkiri.Uru: zuru oke, ike ike, ihe mgbaze.Ihe ọghọm: Ihe owuwu a siri ike, yana ọsọ ihicha na-adị ntakịrị nwayọ karịa nke otu akụrụngwa.